Breaking News | Danya Wadi
»English Version»News»Breaking News
တပ်မတော် တာဝန်ခံမှုရှိရေးကြိုးပမ်းချက် အမေရိကန် ထောက်ခံ
By danyawadi November 3, 2019 Leaveacomment
မိုးမြင့် 2019-11-01 ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက တပ်မတော်ကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ တာဝန်ခံမှု တရားမျှတမှုဖြစ်ပေါ်လာရေး ဘယ်ကြိုးပမ်းချက်မဆို အမေရိကန်က ထောက်ခံကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ RFA- သံအမတ်ကြီးက မြန်မာကိုရောက်နေတာ ၂၀၁၆ ကတည်းကပေါ့။ အဲဒီ ၃ နှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။ Scot – ဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာ သိသာတဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ကလည်း ရှေ့ကိုဆက်သွားနေတော့ ကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ ပြောရမှာပါ။ ကံမကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ကျနော်တို့တင်မက လူတိုင်း မြင်တွေ့ချင်နေတဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးက ထင်သလောက်ခရီးမပေါက်ဘဲ […]
By danyawadi April 13, 2018 Leaveacomment
Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of the Office of the State Counsellor PRESS RELEASE (13th April 2018) The Government of Myanmar expresses serious concern on the news regarding the application by the International Criminal Court (ICC) Prosecutor to claim jurisdiction over the alleged deportation of the Muslims from Rakhine to […]
Rohingya issue will be seen in new light Tribune
By danyawadi October 18, 2017 Leaveacomment
Rohingya refugees walk by night after crossing the border from Myanmar, on the Bangladeshi shores of the Naf river in Teknaf on September 29, 2017. More than halfamillion Rohingya Muslims have poured into Bangladesh in the last month, fleeingavicious Myanmar military crackdown on Rohingya rebels that has gutted villages across northern […]
Speech by Daw Aung San Suu Kyi State Counsellor: ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ရဲ့ နိုင်​ငံ​တော်​ အ​ခြေပြ မိန့်​ခွန်း
By danyawadi September 19, 2017 Leaveacomment
Speech by State Counsellor on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace (19-9-2017) 19-9-2017 Wednesday
UN: Suu Kyi has ‘last chance’ on Rohingya ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၌ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး တစ်ခု
Myanmar’s de facto leader must act to stop “absolutely horrible” tragedy, the UN chief tells the BBC. ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၌ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုသာ ကျန်တော့သည် ဟု ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောကြား တနင်္ဂနွေ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ မြန်မာ့ de facto (ရာထူးအမည်အားဖြင့် မဟုတ်သော်လည်း ပကတိအခြေအနေ၌ ထိုရာထူးတာဝန်ကို ယူထား သူ) ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၌ လူပေါင်းသိန်းဂဏန်း — အများစုမှာ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များ — ကို ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးစေခဲ့သော မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်များကို ရပ်တန့်စေခိုင်းရန် “နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး တစ်ခု” ရှိနေကြောင်း […]
By danyawadi September 6, 2017 Leaveacomment
Nay Pyi Taw,5September – The State CounsellorDawAung San SuuKyi receivedatelephone call from President Erdogan and discussed the issue of Rakhine. President Erdogan said that he is confident that DawAung San SuuKyi asaleader who has faced and overcome challenges and advocate of human rights will approach the situation with vision […]
By danyawadi August 26, 2017 1 Comment
ရိုဟင်ဂျားတွေကိုသတ်ပျက် မိးရိူး နိပစက်မူတွေကို ချက်ချင်း ရပ်ရန် အမေရိကန် က မြန်မာ အစိုရကို ယ​နေ့​တောင်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။ August 26 , 2017 YANGON, Myanmar — An attack by ethnic Rohingya militants in western Myanmar left 12 security personnel and 77 Rohingya Muslims dead inadramatic escalation of communal violence that has plagued the region, as the United States urged authorities to […]
Mob Kill Rohingya Muslim in Rakhine
By danyawadi July 5, 2017 Leaveacomment
By Moe Myint4July 2017 YANGON — A mob killedaRohingya man in the Rakhine State capital Sittwe on Tuesday, according to the district’s Police Major Win Naung told The Irrawaddy. The man was one of seven self-identifying Rohingya Muslims from Dapaing camp for internally displaced people on the outskirts of Sittwe […]